30 Mashoko ane uremu akatorwa pane zvakataurwa naAguri mwanakomana waJake achitaura kuna Itieri, kuna Itieri naUkari. 2 Pavanhu vese ndini munhu asina zvaanoziva,+Uye handinzwisisi zvinhu zvinofanira kunzwisiswa nemunhu. 3 Handina kudzidza uchenjeri,Uye handina ruzivo runopiwa neMutsvenetsvene. 4 Ndiani akambokwira kudenga akaburuka?+ Ndiani akambounganidza mhepo mumaoko ake? Ndiani akamboputira mvura muchipfeko chake?+ Ndiani akasimbisa* migumo yese yenyika?+ Anonzi ani uye mwanakomana wake anonzi ani, kana uchiziva? 5 Mashoko ese aMwari akachena.+ Iye inhoo kune vaya vanopotera kwaari.+ 6 Usawedzera chinhu pamashoko ake,+Kuti arege kukutsiura,Ukazobudiswa pachena kuti unonyepa. 7 Pane zvinhu zviviri zvandiri kukukumbirai. Musandinyima zvinhu izvozvo ndisati ndafa. 8 Bvisai kusataura chokwadi uye nhema pandiri.+ Musandipa urombo kana upfumi. Ingoitai kuti ndidye zvekudya zvangu zvinondikwanira,+ 9 Kuti ndirege kuguta ndikazokurambai ndichiti, “Jehovha ndianiko?”+ Uye kuti ndirege kuva murombo ndikaba ndikashoresa zita raMwari wangu. 10 Usataura zvakaipa nezvemushandi kuna tenzi wake,Kuti arege kukutuka woonekwa uine mhosva.+ 11 Kune chizvarwa chinotuka baba vachoUye chisingakomboreri amai vacho.+ 12 Kune chizvarwa chinozviona sechakachena+Asi chisina kucheneswa tsvina yacho. 13 Kune chizvarwa chine maziso anozvikudzaUye chine maziso anotarisa achizvikwidziridza!+ 14 Kune chizvarwa chine mazino akaita semapakatwaUye chine shaya dzakaita semapanga ekuurayisa;Chinoparadza vakaderera vepanyikaNevarombo pakati pevanhu.+ 15 Zvikwevaropa zvine vanasikana vaviri vanoshevedzera vachiti, “Tipei! Tipei!” Kune zvinhu zvitatu zvisingamboguti,Zvina zvisingamboti, “Zvakwana!” 16 Guva*+ uye chibereko chisingabereki,Ivhu riri kushaya mvura,Uye moto usingamboti, “Zvakwana!” 17 Ziso rinonyomba baba uye risina basa nekuteerera amai+Richatodogorwa nemakunguo emubani,Uye vana vemakondo vacharidya.+ 18 Kune zvinhu zvitatu zvinondishamisa zvikuru,Uye zvina zvandisinganzwisisi zvinoti: 19 Nzira yegondo mumatenga,Nzira yenyoka padombo,Nzira yengarava mugungwa,Uye nzira yemurume ane musikana. 20 Aya ndiwo maitiro emukadzi anoita upombwe: Anodya, opukuta muromo wake;Anobva ati, “Hapana chakaipa chandaita.”+ 21 Kune zvinhu zvitatu zvinodederesa nyikaUye zvina zvaisingagoni kutsungirira zvinoti: 22 Kana muranda ava kutonga samambo,+Kana benzi rava nezvekudya zvakawandisa, 23 Kana mukadzi anovengwa* akaroorwa,Uye kana mushandikadzi akatora nzvimbo yatenzikadzi wake.+ 24 Panyika pane zvimwe zvinhu zvina zvidikidiki,Asi zvakasikwa zviine uchenjeri,* zvinoti:+ 25 Masvosve, haasi zvisikwa zvine* simba,Asi anounganidza zvekudya zvawo muzhizha.+ 26 Mbira,+ hadzisi zvisikwa zvine* simba,Asi dzinogadzira imba yadzo mumatombo.+ 27 Mhashu,+ hadzina mambo,Asi dzese dzinofamba dzakarongeka.*+ 28 Kadzvinyu kanonzi chipfira,+ kanobatirira nemakumbo ako,Uye kanopinda mumuzinda wamambo. 29 Kune zvinhu zvitatu zvinonakidza kutarisa zvichifamba,Zvinhu zvina zvinonakidza kutarisa zvichifamba zvinoti: 30 Shumba, mhuka ine simba pamhuka dzese,Isina wainotiza;+ 31 Imbwa yekuvhimisa; nhongo;Uye mambo ane uto rake. 32 Kana wakazvikwidziridza zveupenzi+Kana kuti wakaronga kudaro,Bata muromo wako.+ 33 Nekuti sezvo kusvina mukaka kuchibudisa ruombaUye kudzvinya mhino kuchibudisa ropa,Kudenha munhu kunoita kuti pave nekupopotedzana.+
^ ChiHeb., “akasimudza.”
^ Kana kuti “asingadiwi.”
^ Kana kuti “Asi zviine uchenjeri hwakanyanya.”
^ ChiHeb., “rudzi rune.”
^ Kana kuti “dzakaita zvikwata zvikwata.”